Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 15:40
M.Y. 11 March 2008 at 19:00
ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ဘ၀တွေတစ်ကယ်ပဲချူချာနေရှာတယ်..ဆိုတဲ့ကိုငှက်သီချင်းလေးကြား ယောင်လာမိတယ်..ကျေးလက်ကလူတွေရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့က..ကမ္ဘာ့မှာရှားပါးသွားပီဆိုတော့ပိုလွမ်းစရာ..
ဒီဝိုင်း 11 March 2008 at 19:34
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်းလွမ်းသွားပြီဗျာ....မြန်မာပြည်ရဲ့ချစ်စရာဓလေ့တွေ...ရိုးရာတွေ...ကူညီတတ်တဲ့စရိုက်တွေ..ဒါနဲ့ အဲဒီ့လေးခွလေးရောပါလာလားဗျ...?း)
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် 11 March 2008 at 21:21
ကလိုစေးထူး 14 March 2008 at 06:40
ရေးထားတာက လွမ်းစရာကြီးဗျာ။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်လိုက်တော့ ဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပိုလိုက်သွားတယ်။
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် 16 March 2008 at 13:46
ရွှေပြည်သူ 1 April 2008 at 22:56
အရေးအသားကောင်းလိုက်တာ သူငယ်ချင်းရယ်။ ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးခံစားရပါတယ်။ လောက်လေးခွကလေး ပေးတဲ့နေရာအရောက်မှာ မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်။ အဲဒီ “ဦးကြီးပု”ဆိုတဲ့ ဦလေးကြီး ကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။